Posted by တန်ခူး at 10:51 PM
ဘယ်တော့မှ မမုန်းဘူး။ အဲ့ဒီဟင်းကို
အင်း.... ဟုတ်ပ..လက်ပံပွင့်ချိန်တောင် ရောက်ပြန်ရော့မယ်။
တန်ခူးတို့ အဒေါ်အပျိုကြီးတွေ အကြောင်းရေးထားတာ သရုပ်ပေါ်ပါ့ပဲ။ မျက်စိထဲကို မြင်တယ်။
အညာသွားတုံးကတော့ သီးစုံချဉ်ရည်ထဲ လက်ပံခေါင်းခြောက်လေးတွေ ထည့်ချက်တာ စားဖူးတယ် တန်ခူးရေ။ အိမ်မှာတော့ အမေက ဈေးက မလွှပွင့်ခြောက်တွေ ၀ယ်လာပြီး မျိုးစုံလုပ်စားတယ်တော့။ မလွှပွင့်ခြောက်ကို သုတ်စားလဲကောင်းတယ်နော်။ ထုတ်ထုတ်လေး။
အမေ့အိမ်နားမှာ လက်ပံပင်ရှီတယ်။ ဟင်းချက်စားရတယ်မှန်းမသိဘူး။ အိမ်က အညာဘက်နဲ့ အဆက်အစပ် သိပ်မရှိတော့ အညာစာတွေ သိပ်မစားဖူးဘူး။ စားဖူးတဲ့ ဟင်းတစ်မျိုးနှစ်မျိုးပဲရှိတာမှာ အကုန်
ကြိုက်တာချည်းပဲ။ ပြောသာပြောရတာပါ။ မကြိုက်တဲ့အစာ လဲခပ်ရှားရှားကိုး။
(ပန်ပန်နှင့် ခပ်ဆင်ဆင်... တခုခုကို ရည်ရွယ်၍ စကားခေါ်သွားသည်...)
Sarr chin lite htar!:D
တစ်ခါမှလဲ မစားဖူးဘူး...အထဲက တံမြက်စည်းက စားလို့ကောင်းတာလား..အပေါ်ကအခွံလေးက စားလို့ကောင်းတာလားဟင်..... (နောက်တစ်ယောက်....) :))))
စားလို့အင်မတန်ကောင်း။ အမရေးလို့ အမေ့ဟင်းတောင်လွမ်းသွားပြီ...
အိမ်မှာလည်း အဲဒါကို တံမြက်စည်းဟင်းလို့ခေါ်တယ်လေ။ အမေချက်ရင် ခရမ်းသီးပါထည့်ချက်တယ်ထင်တယ်။ မေ့တေ့တေ့တောင်ဖြစ်နေပြီ :(
ကလေးဘ၀က အော်ဆိုခဲ့တာ သတိရတယ်.....လက်ပံပွင့်ချိန်.....ခွေးရူးချိန်
လာစားပါလို့ ဖိတ်တာ မဟုတ်လားဟင်
သွယ်ဝိုက်ပြီးမရေးတတ်လို့ လိုချင်တာ ဒဲ့ဒိုးပဲရေးခဲ့တယ်ဗျ :P
မမ အဒေါ်အပျိုကြီးတွေကလဲ ဒီတူမလေးကို ချစ်လိုက်ကြတာနော်။ ဟိုးအဝေးကတောင် လက်ပံပွင့်ခြောက်တွေ လှမ်းပို့ရှာတယ်။ စေတနာ မေတ္တာတွေနဲ့မို့ ပိုကောင်းမှာ အမှန်။
ကြားရုံပဲကြားဖူးတာ၊ တစ်ခါမှ မစားဖူးဘူး။ လက်ပံခေါက်အရည်သောက်လေး မြည်းကြည့်ချင်လိုက်တာနော်။း)
မေတို့အိမ်မှာလဲ ငယ်ငယ်တုန်းက အညာက အမျိုးတွေလာရင် လက်ပံခေါင်းဟင်းနဲ့ ခရမ်းသီးခြောက်က အမြဲပါလာတယ်။ အမုန်းကို စားရတာ။ မေတို့လဲ တံမြက်စည်းဟင်းလို့ ခေါ်တာပဲ။ ငယ်ငယ်တုန်းကတော့ မကြိုက်ဘူးတော့။ စားရလွန်းလို့ မုန်းတာ။ ခရမ်းသီးခြောက်နဲ့ လက်ပံခြောက်ဆို ကြောက်ပြီလို့ အော်ရတဲ့ထိပဲ။ ခု မတန်ခူးပြန်ရေးပြတော့ စားချင်သား။
ငယ်ငယ်က သင်ရတဲ့ လာဟေ့ဒွါး၊ သွားကောက်ချေစို့ ဆိုတဲ့ လက်ပံကောက် ကဗျာလေးတောင် သတိရမိတယ်။
ဗမာပြည်ပြန်တဲ့အခါ မတန်ခူးကို လှမ်းခေါ်လိုက်မယ်။ ဖွားဥတို့ရွာသွားပြီး လက်ပံကောက်ရအောင်နော်။ :)
ကြိုက်မလား မကြိုက်မလား သိရအောင် စားကြည့်ချင်သား
ငယ်ငယ်လေးတုန်းက ကိုယ်တိုင်လိုက်ကောက်ပြီး မိုးတွင်းအတွက် စုဆောင်းခဲ့ရဘူးတယ်။ မိုးတွင်းမှာ ခဏခဏချက်ကျွေးလို့ငိုမဲ့ မဲ့ဖြစ်ခဲ့ရတယ်။ ခုတော့ လက်ပံခေါက်ဟင်း လို့ကြားလိုက် မြင်လိုက်တာ နဲ့ အမေ့ကို နာနာကျင်ကျင်လွမ်းမိတယ်။
လက်ပံခေါက်ဟင်းနိဒါန်းကို စိတ်ဝင်စားသွားတယ်။ ရှာ ကြည့်ရဦးမယ်...။
ပုန်းရည်ကြီးနဲ့ ချက်လည်း ကြိုက်တယ်။ အမဲသားနဲ့ နူးနေအောင်နှပ်ပြီး ချက်လည်း ကြိုက်တယ်။ မောင်နှမတွေကတော့ အခွံလေးကို ဦးထုပ်၊ အထဲက ၀တ်ဆံကို တံမျက်စည်းဆိုပြီး စားရင်းဆော့ကြတာ။ ပြောရင်း သွားရေတောင်ကျလာပြီ။
မနေခဲ့ဖူးပေမယ့် အလည်ရောက်ဖူးတဲ့ အညာကို လွမ်းတယ်..
ဟုတ်တာပ ဟုတ်တယ်ဗျိူ. သဘောကျသဗျာ
၀က်သား ပုန်းရည်ကြီးဟင်းထဲ လက်ပံခေါင်း (ညီမတို့ ဘက်မှာ လက်ပံခေါက်လို့ မခေါ်ဘဲ လက်ပံခေါင်းလို့ ခေါ်တယ် လက်ပံပွင့်ရဲ့ ခေါင်းပိုင်း၊ ဦးထုပ်မို့ တင်စား ခေါ်တယ် ထင်ပါတယ်) ထည့်ချက်ပြီ ဆိုရင် ၀က်သားကို ဘယ်သူမှ မစားတော့ဘူး လက်ပံခေါင်းပဲ လုတော့တာ။ ၀က်သားရဲ့ အရသာက လက်ပံခေါင်းထဲ ၀င်သွားပြီး ၀က်သားဖတ်ထက် လက်ပံခေါင်းက ပိုနူးညံ့ပြီး ၀ါးလို့ ကောင်းတယ်လေ။ ၀က်သားပုန်းရည်ကြီး လက်ပံခေါင်းရောချက်တဲ့ဟင်းရယ် မန်ကျည်းရွက်နု သနပ်ရွက်နု ဥသျှစ်ရွက် ရောထားတဲ့ ချဉ်ဟင်းရယ် ငရုတ်သီးဆားထောင်းနဲ့ ဝေရာရွက်ပြုတ်လေးရယ် ဒညင်းသီးပြုတ် ပြားအောင်ထုပြီး နှမ်းဆီလေးစိမ် ဆားလေးဖြူးရယ် ... အညာမြေနဲ့ တမာလေ မွှေးမွှေးလေးရယ်... လွမ်းလိုက်တာ အမတန်ခူးရယ်...
မစားဖူးဘူး မြင်တော့မြင်ဖူးတယ် ။လက်ပံပွင့်ကောက် အရောက်လာမယ်ဆိုတဲ့ သီချင်းလေးတောင် သွားသတိရမိတယ် ။
မစားဖူးဘူးမရေ.. လက်ပံခြောက်ကို အခုဓာတ်ပုံထဲမှပဲ မြင်ဖူးတော့တယ်.. စင်ကာပူလာလည်ရင် ချက်ကျွေးနော်..နော်.. (သိသိသာသာကြီးကို စကားခေါ်သွားပါတယ်.. :D)
"ဟင်းလေးက ကျွန်မတို့ အညာသူလေးတွေ အသွေးမလှပေမယ့် အချင်းလှသလို အသွေးမလှပေမယ့် အရသာ ထူးကဲကောင်းမွန်လှပါတယ်။"
ဒီအဆိုကို လက်မခံဘူး အမ။ "အလှက ကြည့်တဲ့သူရဲ့ မျက်စိထဲမှာ" ဆိုတဲ့ သိုးဆောင်းစကားပုံလည်း ရှိသားပဲ။ ကျွန်တော်ကတော့ အညာသူတွေထဲမှာ လည်း ကျက်သရေရှိရှိ လှတဲ့သူတွေ အများကြီးပဲလို့ မြင်တယ်။ ကိုယ့်ငါးချဉ် ကိုယ်ချဉ်ပြီး ဥပမာပေးရရင် ကျွန်တော့် အမေနဲ့ အဘွား၊ နှစ်ယောက်စလုံး ဗမာစစ်စစ် အညာသူချည်းပဲ။ ဟီး။
We can buy it in Golden Miles in S'pore. Only the dried stem, no dried petal, will be seen in transparent plastic packs. It can be cooked as part of the mixed vegetables sour soup. VERY GOOD.
r u still alive in there?????
တစ်ခါမှ မစားဖူးဘူး အစ်မ။ ဒါပေမယ့် အစ်မရေးထားတာ ဖတ်ပြီး စားချင်လာမိတယ် အစ်မတန်ခူးရယ်...။
Happy Birthday ပါ ချစ်သော တန်ခူးရေ...
စာတကြောင်း နှစ်ကြောင်းလောက် ရေးလှည့်ပါ...